कट्रिना र विक्कीको विवाहमा मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध, यस्तो छ कारण | Online Nepal
कट्रिना र विक्कीको विवाहमा मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध, यस्तो छ कारण
एजेन्सी । अभिनेत्री कट्रिना कैफ र अभिनेता विक्की कौशल विवाह बन्धनमा बाँधिन लागेका छन्। उनीहरुले आगामी डिसेम्बरको पहिलो साता बिहे गर्न लागेका हुन्।
कट्रिना र विक्कीको विवाहमा मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइँदैछ। विवाहस्थलमा पाहुनका लागि ‘नो–मोबाइल डिक्टेट’ लागु गरिनेछ। इभेन्ट मेनेजमेन्ट एजेन्सीलाई आफूहरुको अनुमति बिना कुनै पनि फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न भनिएको छ।
उनीहरुको विवाह राजस्थानको एक आलिशान फोर्ट–रिजर्टमा हुँदैछ। विवाहलाई लिएर आधिकारिक रुपमा न विक्की बोलेका छन् न कट्रिना नै। उनीहरुले सकभर विवाहलाई गुपचुप राख्न खोजिरहेका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विकी र कटरीना आफूहरुको विशेष दिन भएकाले आफ्नो कुनै पनि तस्वीर वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नपुगोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरुको विवाहको तयारीसँगै एक विस्तृत टिमलाई गोपनियता र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि राखिएको छ।
विवाहस्थलमा एक निर्धारित क्षेत्र हुनेछ, जुन क्षेत्रभन्दा अगाडि कसैले पनि मोबाइल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। ए–लिस्टर बलिउडकर्मीका अलावा दुवैका परिवारका कैयौं व्यक्तिलाई विवाहमा बोलाइएको छ। मोबाइल सम्बन्धी नियम सबैमा लागु गरिने बताइएको छ।
कट्रिना कैफविक्की कौशल
कटरिनाको गालाजस्तै सडक बन्नुपर्ने यी मन्त्रीको अभिव्यक्ति भाइरल
कट्रिनाले विवाहबारे किन मुख खोलिनन् ? पुरानो घाउ बल्झिने डर !
विवाहको खबरले किन तनावमा परिन् कट्रिना ?
विवाह गर्दै कट्रिना कैफ, को हुन् बेहुला ?
अण्डरवेयरको विज्ञापनले हंगामा, नायिका रश्मिकालाई प्रश्न, ‘पैसाका लागि जे पनि गर्ने ?’
कटरीना कैफ र विक्की कौशलबीच खटपट शुरु, ब्रेकअपको डर !
राप्रपा महाधिवेशन: महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने रेखा थापाको घोषणा
अनिल कपुरलाई के भयो ? जर्मनीमा गराइरहेका छन् उपचार
महानायक हमालले किने नयाँ गाडी
ठमेलको क्लब फरेनहाइटमा ‘द राजा कुमारी’को कन्सर्ट